S. America - Mag tsy mampino
Torohevitra fitsangatsanganana 7 tiako ho fantatra alohan'ny hitsidihako an'i Machu Picchu
Machu Picchu no tranonkala be mpitsidika indrindra eran'i Peroa - ary misy antony marim-pototra. Tranokala mahafinaritra izy io izay manan-karena amin'ny tantara sy ny kolontsaina, ary manolotra fotoana maro hankafizana fialan-tsasatra tokana rehefa mitsidika an'i Amerika atsimo. Be dia be…
Eco-Resorts 6 izay mampanantena fitsangantsanganana mahafinaritra any Amazon
Desambra 6, 2016
Ny ala tropikaly any Amazon dia mipaka hatrany amin'ny faritra sivy ary mirehareha amin'ny haavon'ny zava-maniry sy ny biby indrindra eto an-tany. Havoana goavambe goavambe azo zahana na avy eny amin'ny habakabaka ivelany aza. Ary ny fomba tsara indrindra hijerena an'i Amazon…